Teny fanolorana ny famantarana ny Zodiac 12: Avy amin'ny Aries ho Fisakafoanana
Inona no famantarana ny Zodiac? Azonao atao ny mijery miaraka amin'ny sarimihetsika fiterahana maimaim - poana. Raha misy famantarana eo amin'ny zodia (eo anelanelan'ny famantarana roa), dia te hijery akaiky ny daty marina ianao.
Aries : 21 Martsa - 21 Aprily
Famantarana ny afo: Ny herim-po, ny famoronana, ny fiterahana, ny fananganana, ny herisetra, ny fikorontanana, ny fifandonana, ny tsy fisiana, ny tsy fananan-java-manahirana, ny hatezerana, ny mpiady, ny dynamique, ny mpitarika. Ny Ram dia mavesatra, mahery setra ary tsy ampy ny fahamendrehana.
Ny Aries in Love dia adala be mpitia.
Taurus : 21 Aprily-21 Mey
Ny famantarana ny tany: Ny tanjona mifantoka amin'ny tanjona, ny fitiavan-tanindrazana, ny fahatsoram-po, ny fotoana mahafinaritra, ny marary, ny ombalahy (mafy loha), ny mpandraharaha mahay, ny feo mitongilana, ny mpanorina, ny mpihira, ny fitiavana ny zavaboary mampionona. Ny Bull dia mafy loko, mahihitra ary mora mamolavola ny pounds.
Taurus amin'ny fitiavana dia mahitsy fo sy tsy mivadika.
Gemini : 21 Mey-21 Jona
Lozam-pifamoivoizana: Fahalalana, fahiratan-tsaina haingana, mitady ny zava-baovao, mahatsikaiky, mendri-pihetseham-po, maro be, tsy misy fanavakavahana, miparitaka, mifampizara, sariaka, mahafinaritra, mpianatra. Ny Twins dia mariky ny fihoaram-pefy miposaka sy mamitaka.
Ny Gemini in Love dia milalao sy mahafinaritra.
Kansera : 21 Jona-21 Jolay
Famantarana ny rano: Ny fihetseham-po ara-pihetseham-po, miondrika eo amin'ny toe-tsaina, mitandrina ny olona vaovao, mitambolimbolina, mahatsapa fitandremana, mikolokolo, mpiambina ny tantaram-pianakaviana, manana fahatsapana, hery miafina, mpamaky ny fahatsapana. Ny Crab dia manositosika ary manaparitaka ny fanahiana.
Ny kanseran'ny fitiavana dia miaro tena sy mikolokolo.
Leo : 21 Jolay-Aug. 21
Lozam-pifamoivoizana : Smiley, mirehareha, mendri-kaja, mendri-piderana, be indraindray, marefo, mandaitra, manambony, miramirana, mangataka fanajana, tia ny zava-niainana sy ny loza. Ny liona dia emaniac izay nangalatra ilay fampisehoana.
Leo ao amin'ny Fitiavana no manjaka sy mirehareha.
Virgo : 21 aogositra. 21
Fanamarihana eto an-tany: Fitiavana, mikatsaka mandrakariva ny manadio, tia ny mahazatra, mekanika, tso-piainana, mandà, manakiana ny tenany sy ny hafa, tsara, voajanahary, mahay, mazava tsara.
Mijery ny sorokao ny Virjiny, ary mpitsikera tsy manan-tsiny.
Virgo amin'ny fitiavana dia tso-po sy manavakavaka.
Libra : Sept. 21-Oct. 21
Fanilihana ny rivotra: marefo, tia ny hatsaran-tarehy sy ny zavakanto, ara-kolontsaina, marefo, ara-tsaina, ara-tsosialy, miresaka, diplomatika, ary ara-boajanahary amin'ny fifandraisana. Ny maingoka dia marika fa tsy mifanohitra amin'ny fifanandrinana, ary ny codependency.
Libra amin'ny Fitiavana dia sari-tany voa-feo voa-janahary, ahitana mazava tsara.
Ny famantarana momba ny rano: mampihetsi-po, mandresy lahatra, misambotra, maneso, miafina, manasitrana lalina, manintona amin'ny zavatra miafina (miafina), tia ny mistery, any an-trano any ambanin'ny tany, mifamatotra amin'ny fifandraisana, tsy olon-tsy fantatra amin'ny fihetseham-po maizina. Ny Scorpion dia misy fanindronana, koa mitandrema!
Ny Scorpio amin'ny Fitiavana dia miafina sy mafana.
Sagittarius : 21 nov. 21
Famantarana ny afo: Mpinamana, atletisma, mpikatsaka, aventure, mpizaha tany, filozofa (tia ny fahendrena), mamelombelona marina, dot connector, namana ho an'ny rehetra, mampivelatra. Ny Archer dia mahalaza ny marika, ary manahirana toy izany, manoloana ny fanaratsiana ny hafa.
Ny Sagittarius ao amin'ny fitiavana dia filôzôfika sy feisty.
Capricorn : 21 desambra-Jan. 21
Ny famantarana eto an-tany: mikatsaka tombontsoa, ​​miasa mafy, tompon 'ny sehatra ara-materialy, maharitra, andrim-panjakan'ny fiarahamonina, mitady toerana eo amin'ny sehatra, voafetra amin'ny vokatra azo tsapain-tanana, strategista, tsy miankina (na dia misy sary malaza), mpitondra, manam-pahefana, lova.
Ny Capricorn amin'ny Fitiavana dia ny endriny sy ny toe-tsaina.
Fanoroana Air: Trendsetter, fivoriambe mivady, mangetaheta, manaiky ny rehetra, famindram-po tsy hay vakiana, glamour hafa, tontolo maha-olona, ​​mifototra amin'ny fahitana.
Ny Aquarius in Love dia tsy mahazatra.
Pisces : 21 febroary - 21 martsa
Ny famantarana momba ny rano: Zava-mahagaga, mistery, natokana, tsy hita (zanaka tsy hita), tsy voafaritra, tsy misy fitarihana, manalavitra ny 'tena', ny zavakanto, ny zava-misy, ny niharam-pahavoazana, ny hafanam-po, ny fanindrahindrana ny zavakanto, ny mozika na ny dihy.
Ireo Fitiavana amin'ny Fitiavana dia amam-pitiavana sy amam-bika.
Famindrana, fanitsakitsahana & ny fitsipika fanabeazana
Fomba fifampiraharahana amin'ny volavolam-panafody
Nahoana no sarotra ny manala ny savony amin'ny rano malemy?
7 Facts Momba ny bakteriophages
Zavatra 10 Tokony ho Fantatrao Momba ny Chemistry
Control vs. Experimental Group: Inona no maha samihafa azy ireo?
Nahoana ianao no tokony hanasa ny tananao (sy ny fomba fanaovana azy tsara)
Fifandirana - Famaritana, ohatra, ary fifandraisana
Fiompiana dimy mahatsiravina
Ny sanda eo amin'ny biôlôjika sy ny sufixe: ex- na exo-
25 Ray aman-dreny nanam-pahaizana manokana ny zanany
Inona ny sekta ara-pivavahana?
Ny fomba hanamboarana loko misy kofehy misy kofehy amin'ny solika na akora
USF GPA, SAT ary ACT Data
Nahoana ny Lehilahy no ambony kokoa noho ny vehivavy?
Tantaran'ny gazety any Amerika
Inona no atao hoe antimatera?
Tolo-kevitra ho an'ny mpanangom-baovao izay mitatitra ny loza sy ny loza voajanahary
Ny Pros sy ny Tsinin'ny Biofuels
Manolotra ny tanako hiady izy - Salamo 144: 1-2
Sarin'ny Serial Killer Velma Margie Barfield
Kettering University GPA, SAT sy ACT Data
Sarin-tsarimihetsika: Miafatra ny fandrefesana amin'ny sarintany
Rodeo's World Records
Inona no atao hoe Santeria?
Cerén: Village Village any Salvadaoro
Famaritana sy ohatra avy amin'ny pro-Verbs amin'ny teny anglisy
Top Arts Schools any Etazonia
Nahoana ny bug dia manao fiverenana?